NOOCYADA DIGAAGGA ORPINGTON - BEERAHA DIGAAGA
Markaad iibsato shimbiraha cusub, gaar ahaan, digaagga beerahooda, khabiirada xoolaha ee hiwaayadda ayaa xiiseynaya maaha kaliya wax soo saarka ukunta oo ah hal nooc ama mid kale, laakiin sidoo kale hilibka.
Xaaladda beeraha loogu talagalay ee digaagga ee lagu gowraco, waxaa fiican in la doorto cayayaanka kuwaas oo ujeeddadan u ahaa ujeedadaas in la nadiifiyey.
Mid ka mid ah noocyadaas waa nooc ka mid ah Orpington.
Shimbiraha caanahan ayaa aad u qaali ah, laakiin lacagta lagu iibsanayo digaagga ayaa ku bixin doona qaab ukun ah iyo hilib tayo sare leh. Sidaa darteed, looma baahna in xataa xitaa ka fekeraan haddii ay tahay qiimaha digaaga ama shakhsiyaadka qaangaarka ah ee qaansigan.
Xaqiiqdii ma niyad jabi doonto.
Goobta dhasha ee digaaggu waa England, waalidkiisuna waa beerqalaha digaaga ee William Cook, oo ka soo gudubta Black Langshan, Minorca, Sumatra iyo Plymouthrock soo noqoshada 1886.
Tani waxay ka heshay magaceeda meeshii laga xaday - Orpington House.
Waxay calaamad u yihiin digaagga Orpington ballaaran ballaaran iyo xabadka, madaxa waa mid yar oo cabbirkeedu yar yahay, maqaarku wuxuu ku yaallaa qaabka caleen-Rose-qaabeeya.
Guud ahaan, shimbirahaasi waa kuwo aad u cajaa'ib leh iyaga oo weyneynaya sababtoo ah qaabka dhirirka jirka. Xoolaha xayawaankani waa kuwo firfircoon. Markii ugu horreysay, waxay ahayd madow, hase yeeshee geedka canjeerka ah ayaa lagu geliyay hiddaha digaagga.
Sababtaas awgeed ayaa midabka Orpington uu isbedelay oo uu noqday mid dhalaalaya. Pout of digaagga kuwaasi waa inta badan casaan, sidaas darteed, waa adag tahay in la eego iyaga sababtoo ah qaababka anatomical ee dhismaha jirka.
Muuqaal khaas ah oo ka mid ah noocaan waa mid deggan. shimbirahan. Way adag tahay in la cabsi geliyo, xitaa waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid calaamadeysan, maadaama aysan isku dayi doonin inay cararaan haddii ay ku fadhiistaan ​​jilbaha.
Dareenka hooyada ee digaagga Orpington waa mid si fiican u horumarsan, taas oo ka dhigtay iyaga oo tixgeliya chicks ugu wanaagsan.
Sida soo-saarka ukunta, tilmaamayaashu waa dhexdhexaad. Laga soo bilaabo hal hen oo ah sannadka ugu horreeya ee nolosha waa in aadan sugin in ka badan 160 ukumood, sanadka labaad iyo xitaa ka yar - 130 ukumo.
Halkan miisaanka, digaagga ayaa la tartami kara xitaa caanaha ugu caansan ee la jarjarey ee heerarka warshadaha.
Wanaagsan ciyolku wuxuu miisaankiisu yahay 4 - 4.5 kgiyo digaag - 3 - 3.5 kg.
Hilibka digaagani waa cunto, iyo marka la kariyey waxay u egtahay mid aad u qurux badan. Laakiin waxaa la socda xaqiiqda, shimbiruhu waxay u nugul yihiin miisaanka si deg deg ah, taas oo ah, cayilku, sababtoo ah inta cuntada la cunay.
Sidoo kale mid ka mid ah faa'iido darrada digaagga ee noocaan ah ayaa loo tixgeliyaa digaag cadaadis leh, kaas oo hoos u dhigaya geeddi-socodka shimbiraha taranka ee guud ahaan.
Sida arrimaha ku saabsan dayactirka, quudinta iyo ilaalinta, wax waliba waa sahlan tahay. Meelaha dhaadheer ee noocaan ah uma baahna wax badan, sidaa daraadeed way fududahay in iyaga daryeela.
Sababtoo ah u nugulaanta cayilka, nafaqada shimbirahan waa in si adag loo xakameeyo.
Mabda 'ahaan, habka loogu talagalay quudinta digaagga Orpington waa wax ka duwan nidaamka la midka ah ee la sameeyo digaagga caadiga ah. Digaagga waxay u baahan yihiin in lagu quudiyo hadhuudh, geedo iyo caws.
Haddii digaaga ama duufaanka koraayo, markaa waxaad horay u wareejin kartaa cuntada dadka waaweyn, taas oo ay ku jirto kalsiyum iyo borotiin badan. Marka digaagu uu bilaabmayo ukunta, ka dibna ka koobnaanshaha nuujinta mar dambe lama beddeli karo illaa iyo xilliga aad dhaliso.
Digaagga Orpington waxaa lagu quudin karaa qoyaan qallalan iyo qoyan labadaba. Waxa ugu muhiimsan waa in la siiyo waqti isku mid ah maalin kasta.
Halbeegga quudinta qalalan waxaa ku jiri kara qamadida, soybean, keeg, cusbo, kalsiyum carbonate iyo fitamiino.
Cuntada qoyan waxaa lagu sameeyaa iyada oo ku saleysan biyo ama maraq, kaas oo qaybo ka mid ah quudinta qalalan yihiin. Xaalad kastoo, cuntada aad u baahan tahay in aad ku darto macdanta macdanta gaarka ah, oo shimbirta ay heli doonto dhammaan qodobada muhiimka ah ee lagama maarmaanka u ah horumarinta firfircoon.
Tirada cuntada waa inaanay ka badnaan 4 jeer maalintii.
Ka hor inta digaagga la seexanayo, waxay u baahan yihiin in lagu siiyo miir gebi oo dhan, taasoo ka hor-istaagi doonta inay barafoobaan habeenkii, gaar ahaan xilliga jiilaalka.
Sidoo kale waxay u baahan yihiin in ay shimbiraha biyo badan bixiyaansida qiyaasta cabitaanka dareeraha ee digaaggu waa 1.8 jeer ka sarreeya inta cuntada la cuno.
Sidaa darteed, biyaha waa in si joogto ah loo shubaa si aysan u dhammaan, gaar ahaan xagaaga.
Sidoo kale weel gaar ah waxaad u baahan tahay inaad ku shubato walxaha ku jira kalsiyumka, sida qolofta, lafdhabarta ama cagaarka.
Qiyaastii 2 bilood ka hor digaagga bilawday ukumaha, shimbiraha ayaa u baahan doona in la geliyo cunto. Waa suurtagal in la yareeyo xaddiga cuntooyinka la siiyay, laakiin waxaa fiican in la ogaado noocyada hadhuudhka la siiyo kuwa aan ka yareyn kuwa kalooriyada.
Tallaabooyinka ilaalinta ee digaagga ee noocaan ah waxay la mid yihiin kuwa ay tahay in lagu fuliyo digaag joogta ah. First of dhan, waxaad u baahan tahay inaad la socotid nadaafadda ee hudheelka, halkaas oo shimbiraha lagu hayo.
Waa lagama maarmaan inaad si joogto ah isbeddesho oo aad u nadiifiso qashinka xayawaanka ku socda, sababtoo ah bakteeriyada kala duwan ayaa laga yaabaa in ay ka soo baxdo cawska sababtoo ah joogitaanka haraaga qashinka. Waxaa lagama maarmaan ah in la dhaqo ma aha oo kaliya taangiyada iyo quudinta, laakiin sidoo kale ulaha ay shimbiruhu fariistaan ​​habeenkii.
Haddii aad ogtahay in digaaggan ay yihiin kuwa daciifsan, tanina waa dabeecadda digaagga guud ahaan, waa in isla markiiba laga soocaa shimbiraha intiisa kale si aysan u qaadin infakshanka suuragalka ah ee infekshan ama fayras.
Ka hortagga dulinyada ku nool baalasha digaagga, si fiican ayey u shaqeyn doonaan dambaska iyo webiga qulqulka. Isku darka noocaas ah, digaagga ayaa "dharbaaxi doona", si looga hortago horumarinta sheyga.
Rugaha Orpington waxay noqon karaan kuwo dhiig-dillaac ah, haddii nidaam aan fiicnayn lagu sameeyo guriga qolka guriga, taas oo ah, waxaa jira oksijiin la'aan. Marwalba waa lagama maarmaan in la duubo coop, xataa xilliga jiilaalka.
Haddii aad digaaga iibsato digaagga Orpington, hubaal kama dhicin. Hilibka cuntada, oo aad dhab ahaantii kor u qaadday, waxay noqon doontaa mid aad u faa'iido leh sababtoo ah la'aanta daawooyinka antibiyootikada ama daawooyinka kale ee ku jira. Taasi waa sababta aad u iibsato dhowr shimbirood oo kuwan ka mid ah oo aad ku degtaan gurigaaga hooyo.